राजधानी काठमाडौमा अ’नौ’ठो ध’न्दा: यसरी फ’स्छ’न् युवा – Charchit Entertainment
राजधानी काठमाडौमा अ’नौ’ठो ध’न्दा: यसरी फ’स्छ’न् युवा
January 13, 2021 Auther
कुरा हो काठमाडौ सहरको , कुनै एक ठाउमा एक व्यापारी नाम रमेश ( नाम परिवर्तन ) आफ्नो व्यावसाय गरेर बस्थे , तब उनको भेट सिर्जना ( नाम परिवर्तन ) नाम गरेको केटिसङ भयो । यी दुई बिच करिव2वर्ष देखि भएको सम्बन्ध र काठमाडौ पढन आउने ( केही ) केटिहरु कस्ता हुन्छन त ? भनेर यो भनाइ समेटिएको छ । यो घ’टना नि’जसङ मात्रै स’म्बन्धित छ ,,। अरुको जिवनसङ मेल खान गएमा सं’योग मात्रै हुनेछ ।
एकदिन सिर्जना नाम गरेको ( नाम परिवर्तन ) केटिलाई उस्को साथिले चिनजान गरायो । चिनजान गर्दै सा’माजिक सं’जाल फेसबुकमा साथी हुन पुगेउ । दिन रात सधै मेसेज साटासाट हुन्थ्यो , मेसेजमा रमाइला कुराहरु हुन्थे । एकदिन रमेशलाई सिर्जनाले बनस्थली लिन बोलाइन तब रमेश त्यहा उस्लाइ लिन पुगे । रमेशलाई सिर्जनाले घरमा बस्दा बस्दै बोर लाग्यो आज कतै घुम्न जाउ भनिन , रमेशले हुन्छ भने , तब सिर्जनाले आफ्नो एउटा केटि साथिलाई पनि बोलाइन । उनिहरु तिन जना काठमाडौबाट थोरै टाढा कतै बेलुकी बस्न गए । साझको खाना खाएर सुत्ने बेलामा उनिहरुले दुईवटा बेड लिगे , रमेश र सिर्जना एउटामा र अर्कि सिर्जनाकी साथी अर्को बेडमा सुत्न पुगिन ,,! ती रातमा …×…… सबै कुरा भयो ।
उक्त रात गेस्ट हाउसमा बसिसकेपछि रमेश र सिर्जना झनै नजिक हुन पुगे । कुराहरु हुँदै गयो …. अ’चम्मको कुरा त के छ भने रमेश विवाहित थिए ! यो कुरा सिर्जनालाई अवगत नभएको भने होइन ,,! सिर्जनालाई यी यावत सबैकुरा थाहा थियो । रमेशको परिवारको बारेमा , के काम गर्थे , कहाँ बस्थे सबै कुरा बिस्तारै सिर्जनालाई थाहा हुँदै गयो ।
रमेशले सिर्जनाले भनेको सबै कुरा किनिदिने , दिनदिनै सपिङ मल लैजाने , मीठो परिकार खुवाउन रेस्टुरेन्टमा लैजाने गर्थे ,, सिर्जनाको जीवन तब अरु सामन्य केटिहरुको भन्दा भिन्न थियो । रमेश व्यापारी भएको हुनाले सिर्जनालाई झेल्न खासै असर परेन।
सिर्जना भर्खरै काठमाडौ आएर कलेज पढन थालेको भएर उसले कतै चिनेकी थिइनन । समयको सदुपयोग गर्छु भनेर उनले काम गर्न चाहिन , रमेशले उसलाई एक म्यानपावरमा जागिर लगाईदिए । मेनपावरमा जागिर खाएपछि सिर्जनाले मेनपावरमा आउने अलि मन मिल्ने खालको एक केटासङ चिनजान गर्ने , भेटने गरिन । उनले शा’रीरिक सम्बन्ध समेत राखेको रमेशले आफ्नै आखाले देखेका छन । यस्तै हुँदै गयो एकदिन सिर्जनाले रमेशसङ2हजार पैसा मागिन र भनिन ” हजुरले त माया नै गर्नु हुन्न सुरेश ( नाम परिवर्तन अर्को नया केटा ) ले कति धेरै माया गर्छ , पैसा दिन्छ ” । यति भनेर सिर्जना अर्को केटासित बाइकमा बसेर हिडिन
रमेश घरमा आफ्नो बुढी हुदा हुँदै पनि उसलाई धेरै नै माया गर्थे । रमेशको बुढिलाई समेत यो कुरा बिस्तारै मेसो मिल्दै गयो । रमेशलाई पनि सिर्जनाको बारेमा सबै कुरा थाहा हुँदै गयो । रमेश र सिर्जनाको पटक पटकको शारीरिक सम्बन्धबाट 3-4 ओटा बच्चा समेत खेर गयो ।
एकदिन सिर्जना परिक्षा हलबाट बाहिरिदै गर्दा उसले बाटोमा भेटेर सम्झाए र पिटे पनि । ” यति धेरै माया गर्थे तलाइ म ,, तं यस्तो पो रैछेस है भनेर ” रमेशले उस्लाई सम्झाए ।
सिर्जनाले जुन ठाउमा बोलायो त्यही ठाउमा उस्लाइ लिन पुग्थे ,, कामले गर्दा लिन जान नभ्याए रिसाउने , झकिने गर्थिन ।
त्यसपछि सिर्जनाले लगातार रमेशलाई छक्काउदै , कहिले अफिसको मिटिङ छ भनेर फिलिम हेर्न अर्को केटासङ जान्थिन त कहिले कहाँ “” रमेश कहाँ यस्तो सबै जानकारी आइपुग्थ्यो । उनले बारम्बार सम्झाउथे र पिटथे पनि , रमेशलाई मेरो बूढो भन्दै हिडने तर शारीरिक सम्बन्ध देखि हरेक गतिविधि अरुसङ गर्ने भएर रमेशलाई निकै रिस उठथ्यो ।” उसको हरेक सपना र इच्छा पूरा गर्ने रमेश नै हुन्थे ।
कहिले कल्ब त कहिले काठमाडौ बाहिर रमेश घुमाउन लग्थे । जे सिर्जनालाई मन पर्थ्यो उहीँ किन्दिन्थे । यति भनम कि रानी झै बनाएर राख्थे । सिर्जनालाई ब्रान्डेड कपडा चाहिन्थ्यो त उनी उहीँ किन्दिन पुग्थे । यसरी घ’टनाक्र’म चलिरहयो ,,! उनले एकदिन मेरो घरमा बाबा ममिलाई फोन चाहियो भनिन रमेशले त्यसको पनि जुगाड गरेर सिर्जनाको बाबा ममि , दाइ भाइ सबैलाई उनले महङ्गो खालको मोबाइल पठाइदिए । सिर्जनाको घरमा बाबा पाइलसको बि’रामी थिए तब उनलाई भनेर पाइलसको उ’पचार गर्न महँगो औ’सधि र खर्च समेत पठाइदिए ।
सिर्जनाले त अझ यति सम्म गरिनकी दशैमा फोटो खिच्नका लागि आइफोन समेतको माग गरिन । त्यो पनि रमेशले पुराइदिए । समय चलिरहयो ,, एकदिन सिर्जनाले रमेशको मन चेक गर्न एउटा फेक अकाउन्ट खोलिन । त्यसमा रमेशलाई Add गरिन र कुरा गर्न थालिन ,, भेटम , यता जाउ , यस्तो गरौ भन्न थालिन । रमेशले यो अकाउन्ट चलाउने सिर्जना नै होला भन्ने शंका गरिसकेका थिए । त्यसबेला उनले सहजै मेरो गलफ्रेन्ड छ ,, तपाईं मलाई मेसेज नगर्नुहोला भनेर भने । कुरा गर्दा गर्दै सिर्जनाले आफ्नो आइडिबाट मेसेज गरिन र रमेशलाई भनिन , ” किन नया केटिको रिक्वेस्ट यासेप्ट गरेको ? , किन त्यो सङ बोलेको भनेर भन्न थालिन ।”
यति हुदासम्म सबै ठिक थियो ,। तब रमेशले शंका गरे ” कि यो सिर्जना अरु सङ नै पल्किएकी छे , अब यो म सङ बस्न चाहन्न भनेर रमेशले मनमनै सोचे ।”
रमेशले सिर्जनासङ टाढा हुने सोच बनाउन थाले । धेरैचोटि सङै बसेर बि’यर , हु’क्का लगायत खाने , सङै सुत्ने गरेका यादहरु रमेशले बिस्तारै भुलाउन थाले । एकदिन अचानक सिर्जनाले ” रमेशले उनलाई बि’र्सदै गएको अनुभव गरिन तब , उनले फोइजन खाएर रमेशलाई डर देखाइन ।” म म’रिदिन्छु’ मलाई भेटिनस भने , म सङ हिडिनस भने भनेर यस्ता कुराहरुले ब्ल्या’कमेल गर्न थालिन ।
यो कुरा उनको परिवार सबैलाई थाहा थियो ,! यस्तै केटि रैछे भनेर रमेशले बल्ल थाहा पाए । पैसाको लागि केही केटिले आफ्नो इ’ज्जत यसरी लि’लाम गर्दा रहेछन भन्ने कुरा रमेशले बुझे।
अहिले रमेशले सिर्जनाको परिवारलाई चौ’किमा लगेर कागज गराए । चौ’किमा सिर्जनाले सबैकुरा सुइकारिन । उनले ” मैले मन लाग्दा रमेशसङ शा’रीरिक स’म्बन्ध देखि सबै कुरा राखेकै हो अब देखि राख्दिन भन्दै मा’फी मागिन ।” अहिले रमेशको ८-१० लाख रुपैयाँ ती केटिको लागि सकिएको छ । दुबैले आफ्नो स्वा’र्थका लागि आ-आफ्नो प्रयोग गरे ,,। अहिले उनिहरु आ-आफ्नो बाटो हिडछन । यो घ’टना जससङ मात्र सम्भव छ कसैले स’म्बन्धित व्यक्तिलाई अ’सर पुर्याउने खालका कुरा नगरिदिनुहोला ,,! यो एक सत्य जिवनमा घ’टेको घ’टना हो ।
ratopati media bata
यी समस्या भएका ब्यक्तिले भुलेर पनि नखानुस् काउली
आज पुष महिना काे अन्तिम दिन पत्याउनै नसकिने गरि यस्तो भयो सुनको भाउ!
कोरोनाको तेस्रो लहर सुरू हुने लक्षण देखिन थालेका छन्, अत्यन्त आवश्यकमा मात्र बाहिर निस्कनू’
May 15, 2021 Auther